June 27, 2013 – democracy for burma
U WIRA THU_MONKS CONFERENCE သံဃာ့ညီလာခံ အစည်းဝေးကြီး၌သီတဂူဆရာတော် သြဝါဒ _VIDEOS
On June 27, 2013 June 29, 2013 By Burma Myanmar newsIn Burma1 Comment
တိုင်းမဂ္ဂဇင်းပါဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ၏ ကြေငြာချက်။ NDFနော် NLDမဟုတ်ဘူး မှားမဆို.လို.။
On June 27, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
တိုင်းမဂ္ဂဇင်းပါဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ၏ ကြေငြာချက်။
NDFနော် NLDမဟုတ်ဘူး မှားမဆို.လို.။
ပြည်တွင်းစစ် ပြသနာကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးနည်းဖြင့် မကုစားနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ jပည်တွင်းစစ် ပြသနာကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲသည့် နည်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်သာ အဖြေရှာ သင့်ကြောင်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ဗဟိုကော်မတီဝင် တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
“အပစ် ရပ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေကို ကြည့်ပါ။ နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်တွေ ဘယ်လိုဘဲ ဂတိတွေ ပေးကြ ပေးကြ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲက ရပ်မသွားဘူး။ ဒီလိုဖြစ်လာ လိမ့်မယ် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ KIO က သိနေလို့ နိုင်ငံရေးပြသနာကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေရတာဖြစ်တယ်၊ အဓိက ကတော့ တန်းတူရေးနဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပြဌာန်းခွင့် ရရေးပါဘဲ” ဟု ဆိုပါသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့် အားလုံးနီးပါး အပစ်ရပ်စဲသွားပြီး ဖြစ်၍ မကြာမီတွင် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြပြီး တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘော တူညီချက်ကို လက်မှတ် ရေးထိုး နိုင်တော့မည် ဖြစ်သည် ဟု ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့၌နေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ် ခဲ့သည့် စီမံကိန်း ကော်မရှင် အစည်း အဝေးတွင် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
သို့သော် လက်တွေ့တွင် မိန့်ကြားမှုနှင့် တခြားစီဖြစ်နေပါသည်။ KIO အဖွဲ့နှင့် တိုက်ပွဲ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေသည့်အပြင်၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များနှင့်လည်း တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားနေဆဲဖြစ်ပြီး ရာဇသံပါ အပေး ခံနေရဆဲ ရှိပါသည်။ဤသို့ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ယုံကြည်ရဖွယ် ရှိသည့် ကတိကဝတ်မျိုး မဟုတ်သေးကြောင်းKIA က ဆိုပါသည်။
သာဓက အားဖြင့် ယမာန်နေ့ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း မူဆယ် မြို့နယ်ရှိ KIAတပ်မဟာ (၄) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၃၆) တပ်ဖွဲ့နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ ခလရ (၁၂၈) တပ်ဖွဲ့ တို့က ဖိုင်ကောင်း ကျေးရွာ အနီးရှိ လယ်ကွင်းပြင်၌ ည ၈ နာရီမှ ၉ နာရီ အထိ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား ခဲ့သည်ဟုKIA တပ်မဟာ (၄)တပ်မဟာမှူးက ဆိုပါသည်။
ဤလုပ်ရပ်မျိုးသည် ကချင် လူထုအား စီမံကိန်း ကျကျ ဖျက်ဆီးနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS) နောင်မ အခြေစိုက် စခန်းမှ အမှတ် (၇၀၁) စစ်ဒေသမှူး ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီးစွမ်မိဏ်း ကဆိုကြောင်း ယနေ့ထုတ် သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းက ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် အစိုးရသည်မည်သည့် အပစ်ရပ် လက်မှတ် ထိုးထားသည့် အဖွဲ့များကိုမှ ယနေ့အထိ တပ်နေရာ ချထား ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ နေရာ ချထားပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင်အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူ ညီမှု ပထမဆုံး ရယူ ထားသည့် ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်းရေး ကောင်စီ RCSS အဖွဲ့ကိုပင် အကြိမ်ပေါင်း ၇၀ ကျော် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။
အလားတူ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ SSPP/SSA တပ်ဖွဲ့နှင့်လည်း တိုက်ပွဲပေါင်း ၁၂၀ ခန့် ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အပြင် အခြား အပစ်ရပ်ထားသည့် ကရင်နီပြည် တိုးတက်ရေး ပါတီ KNPP ၊ ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ၊ ဒီမို ကရေစီ အကျိုးပြု ကရင် တပ်မတော် DKBAတပ်ဖွဲ့များနှင့်လည်းတပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ များကိုယနေ့အထိ ပြေလည် မှုများ မရရှိ သေးပေ။
ဤအခြေနေ၌ အစိုးရသည် တပြည်လုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပပြီး လွှတ်တော်သို့ တင်ပြရန် ကြံရွယ်ထားပါသည်။ တိုင်းရင်းသား များကလည်း အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲထက် နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးနည်းဖြင့် အဖြေရှာရန် စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက ပြည်တွင်းစစ် ပြသနာကို အပစ်အခတ် ရပ်စဲသည့် နည်းဖြင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူပါက ပြေလည်လိမ့်မည် မဟုတ်ဟု KIO ကဆိုပါသည်။
The Voice Weekly ဂျာနယ် သိစေရန် SSPP အကြောင်းကြား
On June 27, 2013 June 27, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့ထုတ် The Voice Weekly ဂျာနယ်သည် ရှမ်းပြည် အလယ်ပိုင်း ကျေးသီးမြို့နယ်ရှိ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ၏ တာဖာဆောင်း တပ်စခန်းကို အစိုးရ တပ်ဖွဲ့ တို့က တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက် လိုက်သည်ဟု ရေးသား ထားသည့် သတင်းသည် မဟုတ် မှန်ကြောင်းSSPP ဝမ့်ဟိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှ ဗိုလ်မှူးခန္တီးက ဆိုပါသည်။
“တိုက်ပွဲ ဖြစ်တာက ကျေးသီးမြို့နယ် မမ့်ဝပ် ဘုန်းကြီးကျောင်း မှာပါ။ တာဖာဆောင်း တံတားဟာ မမ့်ဝပ် ဘုန်းကြီး ကျောင်းနဲ့က ၁ မိုင်လောက် ဝေးပါတယ်။ တာဖာဆောင်းမှာ လုံခြုံရေး စောင့်ချ ထားတဲ့ ကျနော်တို့ တပ်ဖွဲ့ကို အစိုးရ တပ်တွေ လာတိုက်တာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာကြောင့် အဲဒီလို ရေးရ တာလဲဗျာ။ အချင်းချင်း မှားပစ်တာကို ဖုန်းကွယ် ချင်တာ များလား” ဟု ဆိုပါသည်။
ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့နှင့် ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျေးသီးမြို့နယ် မမ့်ဝပ်ရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်းထံ ရောက်ရှိ eနသည့် SSPP တပ်ဖွဲ့ကို အစိုးရ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ ခမရ ၅၂၅ တပ်ဖွဲ့နှင့် ခမရ ၅၉၆ တို့က စစ်ကြောင်း ၂ ကြောင်းဖြင့် ၂ ရက်ခန့် လာရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာက (၂၄) ရက်နေ့ည ၉ နာရီခွဲ အချိန်တွင် SSPP တပ်ဖွဲ့တို့က ဆုတ်ခွာ ခဲ့ရသည်ဟု ဗိုလ်မှူး ခန္တီးက ဆိုပါသည်။
SSPP တပ်များ ဆုတ်ခွာပြီး များမကြာမှီ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့ ညတွင်းချင်း မမ့်ဝပ်ရွာ အတွင်းသို့ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ ဝင်ရောက် နေရာ ယူခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေ အနေကို မသိ ရှာသော လားရှိုး အခြေစိုက် အရှေ့မြောက်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တပ်များက စစ်ကား (၁၀) စီးဖြင့် ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့မနက်ပိုင်း (၇) နာရီတွင် စစ်ကူအဖြစ် ရောက်ရှိလာပြီး မမ့်ဝပ် ရွာထဲတွင် ရှိနေသော ရလခ လက်အောက်ခံ တပ်ဖွဲ့ကို SSPP တပ်အထင်ဖြင့် ပစ်ခတ် လိုက်ရာမှ အချင်းချင်း မှားပစ် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထိုတိုက်ပွဲတွင် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့မှ ၅ ဦး ကျဆုံးပြီး ၃ ဦး ထိခိုက် ဒဏ်ရာ ရရှိ သွားသည်ဟု မျက်မြင် ရွာသားများက ပြောကြောင်း၊ ထိခိုက်မှုများ သည်လည်း မည်သည့် တပ်ဖွဲ့ဘက်မှ ဖြစ်သည်ကိုမူမသဲကွဲ သေးကြောင်း ဗိုလ်မှူး ခန္တီးက ဆိုပါ သည်။
The Voice Weekly ရေးသားသော သတင်းသည် အချင်းချင်း မှားယွင်း ပစ်ခတ်မှုကို အာရုံေ ပြောင်းလဲ စေရန် အတွက် တာဖါဆောင်း၌ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား သယောင် ထင်ရောင် ထင်မှား ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပြီး လမ်းလွှဲ လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ယူဆ ထားပါသည်။https://www.facebook.com/thevoiceweekly/posts/594385047248425
SSPP နှင့် အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ၏ ဇွန်လ အတွင်း ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများမှာ (၃) ကြိမ် ရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုပါသည်။ ယင်းတိုက်ပွဲ များသည် ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီး၊အစိုးရ တပ်များက SSPP တပ်များကို လာရောက် တိုက်ခိုက် သည်ချည်း ဖြစ်ကြောင်း ယင်းတိုက်ခိုက်မှု (၃) ကြိမ် ထဲတွင်လည်း အချင်းချင်း မှားယွင်း ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲလည်း ပါဝင် ကြောင်း ဆိုပါသည်။ Continue reading “The Voice Weekly ဂျာနယ် သိစေရန် SSPP အကြောင်းကြား” →
SSPP news sources:2000 bags of rice (40 tons), the aid from Nippon Foundation in Japan is unable to deliver toits Wanhai Headquarters
Due to the ongoing clashes between Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA) and Burma Army, 2000 bags of rice (40 tons), the aid from Nippon Foundation in Japan is unable to deliver toits Wanhai Headquarters, according to SSPP news sources.
“The Natala (Border Areas and National Races Development Affairs) Lashio Office promises that once the clashes are over, the rice aid from Japan will be delivered to the SSPP HQ. The clashes between the SSPP/SSA and government troops are occurring in Wanwap village, Kehsi Township in southern Shan State. The confrontation occurred when the government army did not comply with the ceasefire agreement that both sides had signed. Now people are scared to live in the village, even monks have fled from their temples. The government army has occupied the temple’s compound and directs its military operations there,” said Maj. Sai La, the SSPP/SSA spokesperson.
The SSPP/SSA was said to have told the Nippon Foundation earlier that they will not accept the offer if the aid come through the Myanmar Peace Center (MPC). Reportedly, all the current aid from Nippon Foundation, which are distributed to all ethnic groups, are being managed by the MPC.
“The Nippon Foundation and the MPC came together to offer aid in cash at the Natala Office. The Natala then purchased the required amount of rice and stored it in their office. On 24 June, I went to sign the invoice and official documents with the duty officer at the Lashio Natala office, but the bags of rice were not yet delivered,” Maj. Sai La told SHAN.
“We have suggested the Nippon Foundation give us cash instead of rice, because we can purchase the rice ourselves later,” said the SSPP/SSA spokesperson.
He continued by saying, “Not only do our people prefer Shan rice, but the money would also go to local vendors, allowing locals to benefit by gaining more income,” explained the SSPP/SSA spokesperson.
On 24 June, it was reported that clashes occurred between the SSPP/SSA and the Burma Army as the latter with Light Infantry Battalion (LIB) 525 attacked the former’s base at Wanwap village, Kehsi Township in southern Shan State. The next day, 25 June, following the SSA’s withdrawal reinforcement troops from the Burma Army arrived. The two Burmese units then mistook each other for the SSA and engaged in friendly fire for several hours, said an SSPP source.
နေပြည်တော်၊ ဇွန် ၂၇
၂၇-၆-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ၁၄ဝဝ အချိန်မှ ၁၇ဝဝ အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Control of Money Laundering Law (CMLL)) ပြင်ဆင်ပြုစုရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်စောဝင်း ဦးဆောင်၍ တရားမဝင်သော နည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ ဗဟိုထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ Control of Money Laundering Law (CMLL) ပြင်ဆင်ရေးအပြီးသတ် အစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ Control of Money Laundering Law (CMLL) ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အတူ ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးတပ်ဖွဲ့၊ တပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ် စိုးမြိုင်၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်၊ ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးစန်းဌေး၊ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်အောင်ခိုင်၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးသိန်းနိုင်၊ ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးစောဝင်း၊ ဗဟိုဘဏ်မှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဝေဝေအေးနှင့် ရဲအရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
U WIRA THU: “အင်းစိန် အောင်ဆန်းတပ်ဦး အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ညီလာခံ ပုံရိပ်များ” (26.6.2013)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့နယ် အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ထောက်ခံလက်မှတ်ပေါင်း (၁ဝ၄၄ဝ)ကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သူ ဦးသီဟ မှ ဆက်ကပ်စဉ်။
U YE HTUT: TELECOM. OPERATOR TENDER EVALUATION AND SELECTION COMMITEE NPT-ENGL.
တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ရွေးချယ်မှုစနစ်နဲ့ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းများကိုလေ့လာနိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာတင်ဒါဖြစ်လို့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ အရင်ရေးသားထားပါတယ်။ မြန်မာပြန်ဆိုမှု ရရှိပါက တင်ပေးပါ့မယ်။
Myanmar’s government has finally announced Qatar Telecom (Ooredoo) and Norwegian Telenor as the winners of two mobile operating licences, defeating many expectations in the hotly contested race for one of Asia’s untapped telecom markets.
Myanmar’s Telecommunications Operator and Tender Evaluation and Selection Committee releasedapress statement on Thursday evening confirming the two winners.
“(The Union Government) is pleased to announce that Telenor Mobile Communications and Ooredoo have been accepted as the two successful applicants in the nation-wide Telecommunications Licence Award Process,” saidapress statement posted on the website Ministry of Communications and Information Technology.
Neither company opted to join withalocal partner, defeating many experts’ expectations that partnerships with national businesses would provideakey advantage in the race. Many had their eyes on SingTel, Digicel and Japan’s KDDI consortiums because of their strong marketing campaigns, choice of local business partners and favourable government relations with Myanmar.
Now the chips have fallen, it is clear that the right investment strategy any strong marketing may have won the day.
Ooredoo is Qatar’s national telecom company (formerly QTel) and has operations in 17 markets across the Middle East, North Africa, and Asia. Ooredoo did not invest in big marketing campaigns like rivals Digicel and Telenor. However, it did announce that it would spend US$ 15 billion in mobile infrastructure if it is chosen foralicense. This was by far the largest sum proposed by any company.
Telenor on the other hand is Norway’s State-owned company with operations in 11 markets. While during the tender they kept quiet on revealing how much money they would invest, they have run one of the strongest marketing campaigns building up their brand in Myanmar fromavirtual unknown.
Exemplifying their different approaches, Telenor were immediately present on social media and on their website announcing their win.
“We are delighted that Telenor isawinning bidder in what wasahighly competitive telecommunications licence tender in Myanmar. We thank the government for giving Telenor the opportunity to support the country in achieving its goals, and for the open and efficient bidding process,” said Jon Fredrik Baksaas, President and CEO of Telenor Group on their website.
At the time of reporting, Ooredoo had still not commented on their win. Continue reading “U YE HTUT: TELECOM. OPERATOR TENDER EVALUATION AND SELECTION COMMITEE NPT-ENGL.” →
U YE HTUT :ENGLISH/တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က Telenor Mobile နဲ့ Ooredoo ကုမ္ပဏီ တို့ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က Telenor Mobile နဲ့ Ooredoo ကုမ္ပဏီ တို့ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် ကြေညာချက်ဖြစ်ပါတယ်။